avo aryry tokana Light for Airport mpamatsy ary mpanamboatra - Shina orinasa - Langxu Lighting.
Home > Products > avo andry tokana Lighting Pole > avo andry tokana Lighting pole for Airport > avo andry tokana Light for Airport
Ny haavo teknika jiro avoAmpahany jiro1. Ny haavon'ny tsanganana dia 15-50 metatra. Ny poste dia polygonal (mazàna 8/12/16). Ny firafitry ny plug-in no ampiasaina. (Ny fizarana roa ambanin'ny 20 metatra, ny hatevin'ny rindrina 6mm / 8mm; 25 M-30 m telo ny hatevin'ny rindrina 6/8 / 10mm, 35 m-40......
Ny haavo teknika jiro avo
1. Ny haavon'ny tsanganana dia 15-50 metatra. Ny poste dia polygonal (mazàna 8/12/16). Ny firafitry ny plug-in no ampiasaina. (Ny fizarana roa ambanin'ny 20 metatra, ny hatevin'ny rindrina 6mm / 8mm; 25 M-30 m telo ny hatevin'ny rindrina 6/8 / 10mm, 35 m-40 m nizara ho fizarana efatra, ny hatevin'ny rindrina 8/10/10/12 na 6/8 / 10/12) ny halavan'ny plug plug ny halavany 1,5 heny, ny tontolon'ny jiro dia firafitra; ny boribory ambany dia boribory.
Ampahany ny rafitra
1. Ny rafi-panandratana dia manamboatra mekanika fananganana herinaratra tsy miankina ho an'ny jiro maivana, ary ny milina fanamoriana dia manana fitaovana fanalahidy manokana sy fanidy.
Ny fandehanana lavitra ny halavirana 5 metatra dia mety ho tanterahana amin'ny fifehezana lavitra;
2. apetraky ny torapasika tsy miankina fanitsiana napetraka eo anelanelan'ny fitaovana momba ny herinaratra sy ny famiazana mba hisorohana ny vesatra;
3. Ny jiro avo dia mampiasa ny mekanika fanairana ny herinaratra, ary ny jiro elektrika dia azo fehezina. Rehefa tsy mandeha ny fahefana, dia mety ho mandeha mandeha ho azy.
4, ny rafitra misandratra dia tokony hampiasa tady vy stainless vy vita amin'ny savaivony, ny takiana fiarovana amin'ny famolavolana dia takiana tsy ho latsaky ny 6;
5. Ny mekanika miakatra dia misy rindrina fanoherana anti-jiro mba hisorohana ny fihantonan'ny jiro tsy ho tafintohina amin'ny fotoana rehefa tapaka ny tady tariby.
1. Ny tontolon'ny jiro dia rafitry ny vy. Ilaina ny hanana tanjaka ara-potoana ampy amin'ny alàlan'ny fitsaboana amin'ny fikosoham-bary amin'ny ankapobeny. Mora entina mora foana ary mora apetraka io. Ny singa mifamatotra rehetra dia vita amin'ny vy vy.
2. Ny firafitry ny laharana fanaovan-jiro mampifandray ny voa sy ny fananganana bolt fototra dia fitaovana vita amin'ny vy vy rehetra;
3. Ny tontolon'ny jiro dia rafi-pandrefesana efamira misy hazavana mitovy;
4. Ny lamina jiro dia tokony ho azo itokisana rehefa tonga eo amin'ny toeran'ny fampiasana, ary ny fikojakojana ny rafi-toeran'ny toerana dia tokony ho akaiky amin'ny aotra, ary ny fetran'ny takelaka fanaovan-jiro dia mampitombo ny kofehy fitokonana;
5. Ny asa vita amin'ny luminaire amin'ny fikojakojana dia tokony ho vita amin'ny tany.
1. Ny jiro an'ny safodrano dia mampiasa akorandriaka vita amin'ny alum. Ny fitaovana dia manaiky ny L2 aluminium madio industriina mifanaraka amin'ny: GB3190-82. Ny jiro dia mifangaro amin'ny famolavolana, misy ny efitrano fantsom-pahazavana tsy miankina sy ny efitra manokana elektrika. Ny tany dia ampidirina amin'ny fitsaboana ny famonosana vovoka sy taratra anti-ultraviolet.
2, ny tombo-jiro hazavana dia mampiasa karazana vaovao vita amin'ny peratra vita amin'ny vy silicone, fanoherana ny hafanana avo mihoatra ny 250 Â ° C, mahomby amin'ny fiantohana fa tsy misy fahanterana ny vy vita amin'ny silicone, ny antoka maharitra miaro ny fiarovana dia tsy ambany noho ny IP65, grika elektrika: kilasy I. Ny maodelon'ny fampiasana dia manana tombony enti-miasa mora, fiarovana ary azo antoka fanjairana buckle, ary ny bajaina dia vy tsy varahina.
3, reflektory endrika hanomezana antoka ny fitakian'ny làlana fitsinjarana ny hazavana, tsy misy fotodrafitrasa, tsipika mazava. Fitsaboana fitrandrahana: malefaka sy miendrika ary malefaka ny fisehoana, miantoka fa mahatratra 80% na mihoatra ny fahamaingoana ny jiro, ny halaviran'ny haingam-pandeha, ary tsy mora voatazona.
3. Ny fonon'ny translucent dia manisy fitaratra mangarahara avo lenta, izay mitaky fanoherana ny hafanana avo mihoatra ny 250 Â ° C, fifindran'ny avo ary fanoherana ny fiantraikany.
4. Ny jiro dia fitaovana an'ny respiratoran'ny fibre karbonina velona hiantohana ny fivezivezan'ny rivotra ary manakana ny vovoka tsy hiditra ao amin'ny seranan-tariby. Ny tompon-jiro dia manangana rafitra mivaingana ary manana hery fanoherana tena tsara. Ny tompon-jiro dia mampiasa mihazona jiro mihodina ary ny fitaovana elektrika dia tsy maintsy aorina sy apetraka ao anaty jiro.
5, ny jiro dia mifanena amin'ny fiarovana ny tselatra sy ny filàna amin'ny tany, alao ny saina amin'ny toe-javatra fototra sy ny tontolo iainana, ny mari-panafana: -15-50 degre Celsius; hafainganam-pandeha rivotra: 36m / s; fanoherana ny herisetra: 6; hery fanoherana: 20 taona, ny singa famolavolana, famokarana (fananganana) teknolojia dia mahafeno ny fenitra nasionaly.
Ampahany amin'ny rafitra elektrika
1. Ny elan'ny herinaratra amin'ny rafi-jiro avo dia avo ny fanaraha-maso ny fizarazarana dingana tokana (dingana telo). Ny andiany tsirairay dia omena mpanitsaka fizahana sy mpamatsy fizarana misaraka. Ny coil de contacteur dia manamboatra AC 220V, ary ny jiro tsirairay avy amin'ny haavon'ny tsangambato dia mahatsapa ny fifehezana eo an-toerana. Ary ny fanaraha-maso lavitra afovoany;
2, famatsiana herinaratra: 50Hz, AC-dingana telo-tariby mizara roa, 380V / 220V;
3. Ny boaty fanaraha-maso ny fizarana herinaratra ny jiro avo dia tokony hanana fihenam-bidy, haingam-pandeha fohy ary fiarovana amin'ny fitrandrahana;
4, mpivadika circuit, mpiaro amin'ny leakage, contactors, circuit breakers, contactors dia tsy maintsy miaraka amin'ny fifandraisana mpanampy, ary ny fifandraisana mpanampy dia tsy maintsy tarihina mankany amin'ny terminal;
5. Ny kabary famatsiana herinaratra isan-karazany ao amin'ny andry avo dia mifamatotra amin'ny tady tariby vy amin'ny alàlan'ny fiantsonana manokana, ary atsangana miaraka amin'ny tariby vy izy ireo, ary tsy mitondra ilay lanja izy ireo. YC tariby matevina mavesatra mavesatra no ampiasaina amin'ny jiro famatsiana herinaratra mandeha amin'ny jiro;
6, ny jiro poste avo dia tokony hapetraka amin'ny fikojakojana 400V, 32A socket ary 230V, 16A socket tsirairay avy, voaro ny mpanamontsina;
7) Ny fifandraisana misy eo amin'ny tariby famatsiana herinaratra jiro sy ny tariby jiro eny an-tampon'ny andry dia tokony omena vata fanaovana junction, ary tokony ho tonga amin'ny IP65 ny haavon'ny fiarovana ny boaty junction.
9) Omena kapila mitondra fiara, tampoka fiarovana ary tsorakazon'ny taratra mifanaraka amin'ny tendrony ny tampony amin'ny andry. Ny fototry ny basy dia tokony alefa mialoha ny baoritra, ary ny fanoherana ny sehatra dia tsy mihoatra ny 10Î ©;
Hot Tags: avo andry tokana Light for seranam-piaramanidina, Shina, Manufacturers, mpamatsy, Factory, Wholesale, Buy, namboarina, ao amin'ny staoky, Cheap, Pricelist, teny nindramina, Style